SAADAAL IYO TALOOYIN KU SAABSAN TALAABOOYINKA UU QAADI DOONO MADAXWEYNE CABDULAHI YUSUF.
Marka ugu horaysa Ramada Kariim, marka Xigta Hambalyo Madaxweynaha Cusub iyo guusha ka soo baxday shirkii Nairobi.
Magacaabid Ra’iisal Wasaare
Cida uu ka dhigi doono Ra’iisal wasaare qof og ma jiro marka Eebe iyo isaga laga reebo, laakiin dadka wax saadaaliya qofba meel ayuu ku dhuftay. Dadka badankii waxay leeyihiin wuxuu Cabdulahi dooran doonaa qof ka mid ah xulafadiisii SRRC, laakiin aniga waxay iila muuqadaan in laga baxay xili xulafo, xulafo, oo laa gudbay xili qaranimo iyo iku soo dumid qaran. Xili wada shaqayn iyo isku tanaasul.
Sidaa awgeed aniga waxay iila muuqataa hadii uu cabdulahi yuusuf Doonayo in dowladiisu hirgasho waxaa haboon inuu Ra’iisal Wasaare ka dhigo Dr. Cabdulahi Cadow. Sababta aan arintaasi u qabaana waa:
1- Inuu yahay nin labadii shir ee Soomaaliyeedba kaalinta labaad galay.
2- Inuu yahay nin maamulka iyo qiimaha dowladnimo wax ka yaqaan.
3- Inuu ka soo jeedo qabiilada sababay burburka dalka sidaa awgeedna loo baana yahay in ay sawirka iyo jagooyinka sare iska arkaan.
4- Inuusan ka qayb qaadan dagaaladii sokeeye murug iyo maal ahaanba.
5- Inuu dhaqan ahaan iyo deegaanba yahay nin ay cabdulaahi ka soo wada jeedaan mudug,
6- Inuu u tahniyadeeyay Madaxweynaha cusub isla markaasna balan qaadan oofinta dhaartii uu galay.
7- Inuu durba u soo jeediyay qolyaha hubaysan ee Muqdisho inay hubka dhigaan kana waantoobaan ka hortaga dadka ku faraxsan dowladaan dhalatay.
8- Iyo ugu danbayntii in uu cabdulaahi tuso Soomaali weyn inuu diyaar u yahay inuu wax la qaybsado dadka figrad ahaan ay isaga soo horjeedaan.
Hadii uu cabdulahi ka dhigo Dr. Cadow Ra’iisal wasaare waxaa arintu noqonaysaa 189+79=268 taas oo micnaheedu tahay in kalsoonida dowladaasi ay noqonayso 100%.
Waxaa lagama maarmaan ah in Caasumada dalka laga dhigo goob ku meel gaar ah inta la nadiifinayo muqdisho haday qashin ahaan lahayd iyo haday uruurinta hubka sharci darada ah ahaan lahaydba. Sidoo kale waxaa haboon in aan dowladi ku noqon Muqdisho inta laga furago Garoonka Diyaaradaha, Dekeda iyo dib u dishida iyo dib u dayactirka Jidadaka iyo Dhismayaasha Dowlada.
Sidaa awgeed waxaa saadaashaydu tahay in Baydhabo ama Kismaayo mid un laga sii dhigo Caasumada ku meel gaarka ah. Kismaayo waa magaalo leh garoon diyaaradeed iyo deked dowlada ay wax uga soo degi karaan, laakiin si aan loo malay in uu Madaxweynaha cusubi uu naas nuujinayo magaaladaaas weyn ee dadkiisu degaan, waxaa haboon in Baydhabo laga dhigo ,maadaama ay reer Baydhabo taageero wayn u hayaan dowladaan doonayaana qaran dib ugu dhasha Dalka.
Si aysan dowladaani u noqon madax kanool iyo magaalo qudha ku nool, waa in madaxweynaha cusub iyo xubnaha dowladiisu fahmaan micnaha FEDERAL.
Waa in dowladu aysan ku uruurin magaalo qudha ee ay noqotaa in wasaarad kasta gobol la geeyaa si gobolkastaa u helo qaybtii kaga soo hagaagi lahayd shaqo abuuriska qaranka, una dareemi lahaayeen in ay qay ama waax muhiim ah ka yihiin dhismaha dalka. Sidoo kale waa in dowladu ay si loo siman yahay u dhistaa dalka haday ahaan lahayd dekedo, garoomo diyaaradeed, dhismaha cisbitaalada iyo iskuulaadka , iyo qodista ceelasha ee dhulka abaaraysan.
Waa in dowlada cusubi la tashataa dowladaha ku shaqeeya habka Federaaliga sida Yurub iyo Maraykanka, sidoo kale waxay la tashan kartaa oo daruus ka kororsan kartaa Dowlada Isutaga Imaaraadka Carabta, dowladaas oo aan saaxiib nahay aanan is leeyahay way u hagar bixi doonaan dowlada Cusub.
Dhisme Ciidan loo dhanyahay:
Qaran aan ciidan lahayni ma jiri karo, sidaa awgeed waxaa guul ah in uu Madaxweynaha cusubi yahay mid ku xeel dheer dhisme iyo maamul ciidan , sidaa awgeed waa inuu sida ugu dhakhsaha badan u dumaa ciidan qaran oo loo dhanyahay. Ciidankaasi waa in laga ilaaliyaa saraakiishii iyo askartii burburka dalka ka qaybqaadatay, gaar ahaan kuwii xasuuqa shacabka gaystay.
Hantida qaranka iyo shacabka oo laga qaado dadka xaaraanta iyo xooga ku haysta:
Waa in dowlada cusubi howl galkeeda ka bilowdaa xoraynta gobolada xooga lagu haysto, iyagoo goobahaasi gaynaya ciidan ilaaliya amniga shacabka, sidoo kale waa in gobolkasta uu madax ka noqdaa qof ka mid ah dadka deegaanka leh, waana in arimaha deegaamadaasi lagala tashadaa dadka ehelka u ah sida cuqaasha, culimada iyo shacabkaba.
Howshaan waa howl aad u adag oo u baahan dulqaad iyo wakhti sidaa awgeed waa in dowlada cusubi la kaashataa shacabka deegaamadaasi sidii nabad loogu soo dabaali lahaa dhulkooda, loogana xorayn lahaa dadka xooga ku haysta hantida shacabka iyo mida qaranka.
Waa in dowlada cusubi la tashataa khubarada ku xeel dheer ama mas’uuliyiintii hantida qaranka , kuwii munishiibiyada iyo cabirka dhulka, kuwii maamuli jiray beeraha qaranka iyo dhismayaasha dowlada intaba , si ay howshaani habsami u fusho, sidoo kale waa in dowladu furtaa xafiis diiwaan geliya shacabka soomaaliyeed ee hantida maguurtada ahi ka maqantahay sida Guryaha, Beeraha iyo Warshadaha.
Gunaanadka qormadayda waxaan leeyahay waa in dowladaan cusubi awooda saartaa SUGIDA AMNIGA, hub ka dhigista shacabka, isu furta dalka, xoraynta hantida shacabka iyo qaranka. Markii intaa la helo ayaa horumar iyo ganacsiba iman karaa, markaas ayay kalsoonida shacabku soo noqon kartaa , haday ahaan lahayd maalgelin, markaas ayaa shaqo abuurmi kartaa, markaas ayaa jaaliyadda dibada oo soo noqonta dalkana cilmi iyo caqli ku soo kordhinkartaa.
Soomaali waxay tiraahdaa NIN XILQAADAY EED QAAD, Waa in hadaynu nahay shacabka Soomaaliyeed yar iyo wayn, rag iyo dumar, aynu garab istaagnaa oo la shaqaynaa Madaxweynaha cusub iyo Dowladiisaba, taasi oo qudha ayaa soo celinkarta istqraarkii iyo haybadii qaranimada Soomaaliyeed.
Waxaan leeyahay Viva Somalia.